DHAGEYSO:Raila Odinga oo maalintii labaad ku sugan ismaamulka Turkana | Star FM
Home Wararka Kenya DHAGEYSO:Raila Odinga oo maalintii labaad ku sugan ismaamulka Turkana
DHAGEYSO:Raila Odinga oo maalintii labaad ku sugan ismaamulka Turkana
Hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa maalintii labaad ku sugan dowlad deegaanka Turkana isagoona wali sii wadi doona kulamadiisa siyaasadda ah oo uu la yeelan doono mas’uuliyiinta ka soo jeeda ismaamulkaas.
Madaxa xisbiga ODM ayaa maanta booqan doona xerada qaxootiga ee Kakuma iyo Katulu oo ku taala waqooyiga ismaamulka Turkana.
Mr Odinga ayaa booqashadiisa Turkana waxa uu diiradda ku saaraya sidii dadka halkaas ku nool uga dhaadhicin lahaa inay taageraan warbixinta guddiga dib u heshiisiinta iyo mideynta shacabka ee BBI.
Shalay ayay ahayd markii ra’iisul wasaarihii hore dalka uu isku soo bax qabtay isagoona sheegay hadii dadka reer Turkana ay meelmariyaan BBI-da ay ka faa’iidaysan doonaan balaayiin shillin ah.
Previous articleUruka KNUN iyo golaha CoG oo lagu eedeeyay inay siyaasadeeyeen daryeelka shaqaalaha caafimaadka
Next articleMadaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay fashilka shirka Dhuusamareeb kuna eedeeyay MD Farmaajo